Deg Deg:Cali Khaliif Galayr Oo Widhwidh Kula Shiraaya Xubin Mudo Ay Is Khilaafsanaayen. | khaatumonews
Deg Deg:Cali Khaliif Galayr Oo Widhwidh Kula Shiraaya Xubin Mudo Ay Is Khilaafsanaayen.
Mar 13, 2018 - 4 Aragtiyood
Waxaa Maanta gaaray Degmada widhwidh Gobolka Cayn Dr cali khaliif galayr madaxweynihii Hore Khaatumo iyo Xubno kamid ah Kooxda Uu Hogaamiyo.
Cali khaliif galayr iyo koox u wato ayaa ka Kicitimay Saaka laascaanood iyagoo Duhurnimadii Maanta gaadhay degmada widhwidh oo Ilaadii 100 Kiilo mitir u jirta laascaanood.
Qorshaha galayr Ee Widhwidh ayaa ah Mid Ka kooban Laba qodob.
In Lagu heshiisiyo Isaga iyo maxamuud sh omar oo Isna Saaka ka soo kicitimay Buuhoodle mudana ay khilaaf Ku kala maqnaayen Cali khalif galayr tan iyo heshiiskii caynaba ee sanadkii hore..
In Dib loo abaabulo mashruuci fashilmay Ee wadahadalka Galayr iyo Somaliland.
Waalwaaley cali mahbar magaranwaayey dhulbahante isaaq doonimayee orod oo beesha aad wax u doonayso meel kale wax uga raadi walee adaa wareeri
Garaadka Guud ee Darood-SL/DDSI says:
Heshiiska Galaydh iyo Somaliland ku laha kkkk
Waar Dr. Galaydh waa Somaliland, Somalilandna waa Dr. Galaydh waa hadi aad wax fahmaysid.
Dr. Galaydh iska daaye Sheikh Darood, ALLAH HA UU NAXARIISTE, nin reer Somaliland ah buu aha, nin reer Sanaag ah buu aha, mise taas ma ogid oo doqon qurbajoog ah baad tahay?
Sayidka (Ina Cabdullahi Xassan) isna nin reer Somaliland ah buu aha waxaanu ku soo korey Somaliland(carro Dhulbahante).
Beeshi ugu horeysay ee ka mid noqota Darawiishta waxa ay ahayd beesha Habar Yoonis ee Somaliland. Beeshi askarta ugu badani kaga jireen Darawiishta marka dambe beesha Dhulbahante ee Somaliland bay ahayd.
Beeshi dilki ka badbaadisay sayidka marki Majerteen ku weerareen Sanaag waxa ay ahayd beesha Tuurwaa(muuse ismaciil/habar yoonis). Waa marki uu Sayidku tiriyay gabaygi MA DUQAYNAY REER BARI ee ay ju jirtay tudhicdi ahayd “Duca Awliyaad buu qabaa dhegaha Tuurwaaye(muuse ismaciil)”.
Haye maanta Daroodka Somalia gaar ahaan Majerteen iyo Marexaan waxa ay isu soo bahaysteen cayda Dr. GALAYDH oo ay ku naceen kartidiisa iyo inu mar walba la socdo shirqoolada ay uu maleegayaan Daroodka Somaliland.
Garaadka Dhulahante ayaa 1960 oga xumaanta iyo xaasidnimada reer Somalia uu qabaan reer Somaliland waana tii uu sida adag uga horyimi midowga labada dal balse Somaliland beelaheeda kale oo aan aqoonti Garaadku uu laha dhaqankooda baa jibbo Soomaliweyn qaaday waana tii midowgu fashilnay dhacay.
Anaga Berbera ka talina iyo Somalia ka talisa Somaliland waxa barbar socota DAROOD anaga(Somalia) ah, Daroodka Somaliland ma aha Darood hadi ay goaankooda ku socdaan, anaga oo qudha(Somalia) ayaa magac Darood ku hadli karna, rayiga nocaas ah waxa si weyn uu diiday Saladiinta Ogadeen ee DDSI oo cod dheer Daroodka Somalia ku yidhi “anaga Itoobiya la ina yidhaahda, ka dhex baxa arrimaheena, boos idin kama banaana halkan(DDSI) iyo ka hadal toona.
Darood kuwa aan magax ku lahayn xumaan mooyaane(marexaan iyo majerteen) baa raba in Daroodka magaca leh(Daroodka Somaliland iyo DDSI) ku karbaashan magaca Darood, waa dhaqanka xun ee Somalia ee biliqeysiga ah.
Bal yaa sheega tariikh ama magac Darood ku leeyahay Soomaali dhexdeeda oo aan ahayn nin reer DDSI ah ama reer Somaliland ah?
Sheikh Darood(Sanaag, Somaliland)
Sayidka(berbera, carro Dhulbahante, Somaliland)
Cabdi Bille(Dhulbahante, Somaliland)
Cali Dhuux, Ismaciil mirre(Somaliland)
Gabayadi Guba(reer Somaliland/reer DDSI)
Daroodka Somalia magac xuma moyaane maxay hayaan? Siad Barre, Cabdullahi Yusuf, waa uun wax laga yaqyaqsoodo. Waa sii wadi kara laakin caawa halkaas ha ino ahaato.
Dr. Galaydh dameer dhuusadiisu wax kama qaadayso ee ama cabaada ama idinko nool is aasa, danta reerka iyo danta Somaliland loo dabafadhiisan maayo Somalia magacaad doontaan sheegta ee. Darood waa magac Somaliland iyo tariikh Somaliland iyo DDSI ee anaga baad ino dabafadhiisanaysaan magaca beesha laga bilaabo maanta.
Waa Rahanweyn Resistance Army oo cashar lama ilaawaan ah u dhigey hawiye maantana ka taliya Goonfur Galbeed oo ka mid ah xeebta Jasiira ee duleedka Muqdisho .
Dhulbahante miyeey ka liitaan Raxanweyn maxay dhabano qabsiga iyo isdulleenta .
Soomaalida Xalaasha Ah says:
Gabayaa beesha Ogadeen uu dhashay oo si kama dambays ah Majerteen gabay ku ba’biiyay:
search: kas iyo maag